JungleScout: Qalab iyo Tababar Lagu Bilaabayo Oo Lagu Kordhinayo Iibintaada Amazon | Martech Zone
Ma jiro wax hoos u dhigaya saameynta Amazon ee tafaariiqda iyo ganacsiga. Ma aha in la xuso burburka ka dhacay warshadaha tafaariiqda iyadoo ay ugu wacan tahay faafida iyo go'aanka xigay ee lagu xayiray inta badan dukaamada yaryar.
Maanta, in ka badan boqolkiiba 60 macaamiisha ayaa bilaaba raadintooda internetka ee raadinta ee Amazon. Dakhliga Amazon ee ka soo gala iibiyayaasheeda suuqa wuxuu kordhay in kabadan 50 boqolkiiba sanadka 2020 marka loo eego sanadkii ka horeeyay.
2021 waxay isbadal weyn ku keeni doontaa Amazon iyo kuwa wax iibiya
Waxaan ahay unabashedly an Amazon Ra'iisul Dukaameeyaha oo ku raaxee raaxada helitaanka waxkastoo gurigeyga la geeyo. Xitaa waxaan haystaa Amazon Key halkaas oo darawalku uga tago xirmooyinka si ammaan ah garaashkayga. Weligay kuma raaxaysan wax iibsashada oo markaa alaabtayda la geeyo gurigeygu waa mid cajiib ah.
Haddii aad iibinayso alaabada maalmahan, xitaa dukaankaaga internetka, ku iibinta Amazon waa wax aad u badan oo loo baahan yahay. Waxaa jira hoos u dhac, dabcan. Wax soo saarkaaga waxaa loo soo bandhigayaa mid ku dhow kuwa kula tartamaya. Tartamayaashaada waxaa laga yaabaa inay ka jaban yihiin ama leeyihiin heshiisyo fiican. Oo… waxaad lumineysaa xakameynta khibrada wax iibsiga adoo u weecanaya Amazon.
Runti way habaarantahay hadaad sameyso, habaaro hadaadan sameyn. Ganacsi ahaan, dhamaanteen waa inaan sameyno xoogaa allabaryo ah si aan ula kulanno iibsadayaasha wax soo saarkeena iyo adeegyadeena. Shaki kuma jiro inaad ganacsigaaga si weyn ugu kobcin karto shirkadda Amazon isla markaana aad si fudud ugu ballaarin karto ganacsigaaga.
Sida suuq kasta oo ballaadhan, caqabaddaada ugu weyn ayaa ah sida loo aqoonsado fursadaha si loo wanaajiyo loona xayeysiiyo badeecadaada si looga faa'iideysto astaamaha raadinta macaamiisha oo aanad u jabin tartan ku saabsan Xayeysiinta Amazon. JungleScout waa madal loo dhisay in safarkaaga iibinta uu fududeeyo. Barxadku wuxuu awood u siinayaa iibiyeyaasha Amazon inay:
Research oo ay helaan alaab baahi badan loo qabo oo la iibiyo.
Dhis adiga faa iido iibinta on Amazon.
Dhammaan waan ku siinayaa tababar iyo taageero waxaad ubaahantahay wadada.
JungleScout waxaa u dhisay iibiyeyaasha iibiyaasha. Waxay bixiyaan casharro gaar ah, hagitaanno tallaabo tallaabo ah, kalfadhiyo dul-saaran, tababar toddobaadle ah, kooxo maskaxeed, iyo inbadan!
Iyadoo JungleScout's Fursad Raadiyaha, waxaad daaha ka qaadi kartaa baahi sare, keywords keywords-tartan si aad u hesho badeecado leh faa'iido ugu badnaan leh Amazon. Mashruucoodu wuxuu kaa caawin doonaa inaad aqoonsato isbeddellada iyo shaandhaynta fursadaha adoo adeegsanaya fikradaha AI-wada si aad si kalsooni leh ugu farsameyso istiraatiijiyadda wax soo saarkaaga.
JungleScout's Raadiyaha alaabta waxay kaa caawineysaa inaad keydiso oo aad kormeerto fikradaha wax soo saarka si aanad marnaba u lumin fursad. Lasoco badeecad ama koox badeecooyin ah si aad u qiimeyso iibka waqti ka dib iyo isbeddelada dhibcaha, baalal lama filaan ah, iyo xilliyeed.
Waad qiimeyn kartaa kartida wax soo saarka oo ku yaree raadintaada miirayaasha cilmi-baarista ugu badan ee wax soo saarka, iyo sidoo kale xisaabiyaha macaashka si uu kaaga caawiyo inaad isbarbar dhigto qiimaha, dakhliga, iyo ujrooyinka FBA ee fursadda wax soo saar kasta.
Weligaa ha seegin fursad aad ku kasbato dib u eegis. Jungle Scout ayaa ah Dib u eegista otomaatiga muuqaalka ayaa si buuxda otomaatig u ah dhammaan nidaamka dalabka Dib-u-eegista Iibiyaha Dhexe si aad ugu maalgelin karto waqti aad dib ugu soo noqotid meheraddaada. Hubso in amar kasta oo u-qalma uu helo codsi dib-u-eegis ah, la soco heerka codsiga, iyo xitaa eeg inta saacadood ee aad keydisay.
Ku Bilaw JungleScout
Xayeysiinta On Amazon
Xayeysiinta Amazon hore loo yaqaan Adeegyada Suuqgeynta ee Amazon (AMS), waa erey dallad ah oo loo adeegsado in lagu sharxo dhammaan xalalka xayeysiinta ee Amazon. Waxaa loo kala qaadi karaa laba qaybood:
Xayeysiiska On-Amazon - Is-Adeeg Amazon PPC (Xayeysiiska lacag-gujinta ah)
On iyo Off-Amazon Ads - Adeegga Maamulka ee Amazon DSP (CPM, ama kharashkiiba kun aragti, xayeysiis)
Iibiye ahaan, yar ama weyn, waxaa muhiim ah in si buuxda loo fahmo aaladaha xayeysiinta kala duwan ee ay Amazon bixiso-gaar ahaan maadaama tartanku sii socdo. Waxyaabaha la bixiyo oo dhammeystiran ayaa halkan ku taxan tilmaamahan xayeysiinta ee cajiibka ah ee iibiyaasha JungleScout.
Hagaha Xayeysiinta ee Amazon
Fulinta By Amazon (FBA)
In kasta oo Amazon ay bixiso habab ay ku buuxiso alaabtaada adigu, haddana waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa barnaamijka fulinta ee Amazon, FBA, si aad diiradda u saarto badeecada, khibradda baakadaha, iyo dadaalka suuqgeyntaada. Ganacsiyada sida weyn u maal galiyay si fudud helitaanka wax soo saar la sameeyay ama la soo saaray, FBA waa ikhtiyaar aad u fiican maadaama aad si toos ah ugu gudbin karto Amazon iyaguna ay daryeelaan inta kale.
Amazon waxay leedahay mid ka mid ah shabakadaha ugu horumarsan adduunka. FBA waxay awood u siineysaa ganacsigaaga inaad ku keydiso alaabadaada xarumaha fulinta Amazon, ka dibna xirmooyinka Amazon, maraakiibta, iyo waxay siisaa adeegga macaamiisha alaabadaada.
Samee FBA - Abuur kanaga Koontada iibinta Amazon, oo soo gal iibiyaha Central si qotomiyey FBA.
Abuur liisaska alaabtaada - Mar adiga ku dar alaabadaada ilaa buugga 'Amazon' cadee liiska FBA.
Diyaarso alaabtaada - U diyaari badeecadaada gaadiid aamin ah oo aamin ah oo tagaya xarunta fulinteeda, sida laga soo xigtay Tilmaamaha xirxirka Amazon iyo shuruudaha rarida iyo marinka.
Alaabadaada u rar Amazon - Abuur qorshahaaga maraakiibta, daabac sumadaha Aqoonsiga shixnad ee Amazon, una dir shixnadahaaga xarumaha fulinta ee Amazon. Wax badan ka baro u diraya alaabada Amazon.
Tags: Amazonamazon fbadarajada alaabta amazonraadinta alaabta amazontababarka iibinta amazonjunglescoutqalabka cilmi baaristaiibinta amazon
Hammi: Gammaanta Si Aad u Maamusho, U Dhiirrigeliso, oo aad u Badiso Waxqabadka Kooxdaada Iibinta